Manuela oo la eryey | WWW.SOMALILAND.NO
Manuela oo la eryey
Oslo (somaliland.no)Wasiirka Caruurta-qoyska iyo sinaanta ee Norway Manuela Ramin Osmundsen oo ahayd wasiirkii ugu horeeyey ee ajaanibka ah, ayaa maalintii arbacada ahayd iska casishay xilkii ay mudadda 4 bilood ah haysay. Munuela ayaa saxaafadda dalku daba-gashay kadib markii la soo ogaaday in ay gabadh ay saaxiib yihiin shaqo siisay. Shaqadaas oo ah masuulka xuquuqda caruurta ilaaliya. Taas oo kiiska lagu haystay uu yahay in aan qofka xilkaa loo dhiibayaa aanu noqon qof ay saaxiib yihiin wasiirka wasaaradda caruurta. Iyadda oo loo arkayo in aanu dhexdhexaad qofkaasi noqon karin, isla markaana gudan karin xilkii loo igmaday.
Manuela ayaa usbuucan oo dhan jaraaidku kolba ku soo qabanayeen jawaabo aan dhab ahayd oo kala duduwan oo ay saxaafadda u sheegaysay. Maalinti salaasadda ahayd ayaa waxaa uu raysal-wasaare Jens Stoltenberg sheegay in uu aaminsanyahay oo uu ku kalsoonyahay wasiirkiisa. Laakiin maalintii ka danbaysay ayaa waxay u eegtahay in la yidhi alaabtaada xidh-xidho kadib markii la soo ogaaday in ay warbixin muhiim ah ka qarisay raysal-wasaaraha. Warbixintaas oo loo turjumay in ay u eexatay gabadhii shaqadda la siiyey. Eexadkaas oo keenay in tartamayaashii shaqadda kula tartamayey laga hormariyo.
Ilaa iyo imika wasiir cusub looma magacaabin wasaaraddan. Laakiin sida ay saxaafaddu sheegayso, waxay u eegtahay in wasiirkii keli ahaa ee dadka asal ahaan ajaanibka ahi dawladda ku lahaayeen in halkaa lagu waayi doono. Waxaana loo badinayaa in qofka loo magacaabi doonaa uu yahay qof norweyji ah. Wasaaradda ayaa muhiim u ah dadka ajaanibka asalkood yahay madaamay ay ka shaqayso waxyaabo badan oo iyagga taabanaya.
Wasaaradda ayaa waxyaabaha ay ka shaqaynayso ay ka mid yihiin qorshe-dawladeed lagaga hortagayo gudniinka gabdhaha. Qorshahan ayaa la sugayaa in uu dhawaan soo baxo. Isla markaana si gaar ah u taaban doono dadka soomaalida ah ee Norway deggan oo kor u dhaafay 20 000 oo qof. Dhinaca kale ayaa waxaa wasaaradanu tahay mid ay u qadhaabsi tagaan oo ay ku xidhanyihiin dad badan oo soomaali ah oo lagu eedeeyo in ay ka faa’iidaystaan dhibaatadda dadka soomaali ah haysata.
Waxaa kale oo iyadduna jirta in wasiirkii ka horeeyey Manuela ahayd gabadh aad ula dhacday oo ka heshay barmaamijkii aanay dadka soomaalida ahi u boggin ee laga soo duubay Somaliland, ee sheegayey in hablaha soomaalida ah inta la kaxeeyo xiligga xagaaga in la geeyo Somaliland si loogu sameeyo xad-gudubka gudniinka. Si kastaba ha ahaatee waxaa muhiim noqon doonta qofka wasaaraddan la keeni doono, iyo sida uu u sii wadi doono hawlihii ay wasiiradii hore bilawday oo dad badani u arkayeen in ay yihiin qaar ka badbadin iyo ula-jeedooyin gaar ah laga wato. Waxaa la odhan karaa intii ay Manuela haysay jagaddan oo ahayd muddo 4 bilood ah, waxaa laga dareemey in ay nabad-gelisay dadka soomaalida ah ee Norway deggan. Taas oo laga dareemi karo wareerkii ay wasiirkii hore iyo kooxdeedii ku hayeen soomaalida, iyagga oo u soo adeegsan jiray saxaafada. Hadaba waxaa xiiso badan leh bal sida uu u dhaqmi doono qofka xilkan loo dhiibi doono.
Sida ay saxaafadda Norway soo warinayso ayaa waxaa loo malaynayaa in ugu yaraantii la sugi doono 10 cisho ka hor inta aan la magacaabin wasiir cusub. Taas oo ay ugu wacantahay in Boqorkii dalku fasax ku maqanyahay.
« Tusener fikk bli nordmenn Kosovo oo beri goosanaysa »